Semalt Shares 5 Essential Plugin Types Zvose zvinodiwa neWespress Site
WordPress ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye yakanakisisa yehuwandu hwehutungamiri hwehutano uye inopa unhu husina kufanana hwevashandi vaviri uye vadzidzisi. Izvo zviri nyore kushandisa uye zvinogona kushandiswa kugadzira zvose zvese zvinokosha uye zvakashambadzira mawebsite. Kunyange kana iwe usati uri unyanzvi webhutani webhutori, unogona kushandisa WordPress kuti uite masayenzi ezvidzidzo. Iine zvinhu zvakawanda zvemashoko nemapulagi ekutora kubva, asi zvinoshamisa zvinoshamisa uye zvinokosha zvinowanzobudiswa pasi apa naRyan Johnson kubva Semalt .
Kuchengetedzwa kwebhodhi nevanokuvadza kunofanira kuva chinhu chinokosha pane webmaster chero ipi zvayo mazuva ano. Unofanirwa kuchengeta chimwe chinhu panzvimbo yekudzivisa kukanganisa kwakajairika. Ndinofara, pane zvimwe zvidzidzo zvepamusoro uye zvakasimbiswa kuti uve nechokwadi chekuchengetedza kwako paIndaneti. Shokofence ndeimwe yemapulagi akaisvonaka uye anonyanya kukosha kusvika nhasi. Inobatsira kuchengetedza webhusaiti yako uye inowanikwa kune zvose zviripo uye zvakabhadharwa. Iyi plugin inotarisira kuva yako yose-in-one-kuchengetedza sarudzo uye inogona kubvisa nyore nyore mabhoti-masimba ekurwisana uye kuedza kwenyika-maitiro okupinda.
Zvinyorwa zvekuchengetedza zvinyorwa:
Mazhinji emakambani ekubatira anoramba achichengetedza vatengi vavo, asi hatigoni kuvimba navo nekuda kwezvakavanzika zvevamwe. Kana iwe usingadi kuva mukana wekurasikirwa nedhaini yako, unofanira kuisa purogivha yekuchengetedza muShokoPress nokukurumidza sezvaunogona..Purezidheni yakakurumbira iwe unogona kuedza ndeye Backup Buddy. Icho chinhu chinoshamisa zvinoshamisa zvinokuita kuti uratidze mavhiki ega ega, zuva nezuva uye pamwedzi. Iyo ine simba rekuchengetedza mafaira ako paIndaneti uye pasina, uye iyo inonyanya kukosha yepodgin iyi ndeyokuti kubhadhara kwayo mari inongova $ 70 chete. Izvi zvinoita kuti uchengetedze mafaira kusvika 1GB. Uye kana iwe uchida purogiramu yakasununguka, unogona kuedza BackWPup.
Search injini optimization plugins:
Kana uchida kukwevera vanhu vazhinji kune yako yepaiti uye uchida kuti iite kuti zvive nemigumisiro ye injini yekutsvaga, unofanira kuedza injini yekutsvaga optimization plugins mu WordPress. SEO kana kutsvaga injini yekugadzirisa zvakakosha kukwevera vanhu kune mawebhusayithi, uye iwe unogona kushandisa mapurusi akasiyana-siyana kuti uwane zvinhu zvakaitwa. WordPress SEO ne Yoast ndiyo yakanakisisa uye yakarurama yakawanda. Iyo iri mhinduro yakazara yezvinetso zvako zvose zvinosangana neSeO. Inokubatsira kuti uise zita reSeO, tsanangudzo, keywords, uye meta tags kumapeji ako ewebhu nyore uye anoponesa nguva yakawanda.
Zvemagariro ehupfumi muvhu:
Nzvimbo dzezvemagariro evanhu dzakagadzirisa nzira dzatinogovera zvikamu pa internet uye tatova chikamu chinokosha chebhundaneti rose pasi rese. Kune vakawanda mawebsite, kuendesa motokari kubva kuvanhu vekugarisana nevamwe zviri nyore, uye iwe unogona kushandisa zvidzidzo zvemashoko evanhu. The Share Buttons by AddToAny iyi yakazara uye yakashandiswa zvikuru plugin. Iko inoshandiswa uye inokuita kuti ugoverane zvido mumashiripiti ezvehupfumi nyore nyore. Iwe unogona zvakare kuedza Easy Social Share Buttons ye WordPress iyo ine zvakawanda zvezvingasarudzwa uye zviitiko kuti zvibatsirwe.
Kana uchida kutarisa hutano hwehupenyu hwako hwewebsite, unogona kusarudza kushandisa Google Analytics. Zvisinei, kana iwe uchida mamwe mashoko akakwana uye pakarepo, unofanirwa kuisa WordPress plugin nekukurumidza. Google Analytics ndiyo ndiyo inonyanya kuongorora yekugadzirisa mhinduro paIndaneti. Izvo zvakasununguka uye pakarepo kuti zvibatanidzwe neShoko rako rePepa. Iwe unogona kutarisa zvose zvinosangana, kuwana nguva-yenguva yekuziva uye uite kuongorora kweA / B uchishandisa chirongwa ichi Source .